Dowlada SOomaaliya iyo Saraakiisha Midowga Africa oo ka hadlay weerarkii Maanta – SBC
Dowlada SOomaaliya iyo Saraakiisha Midowga Africa oo ka hadlay weerarkii Maanta
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareyn kulul ka soo saaray qaraxyadii iyo weerarkii maanta lagu qaaday xarnta Hay’ada UNDB ee Magaalada Muqdisho,
Wasiirka Koobaad ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon saacid ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay ka xunyihiin isaga iyo Shacabka Soomaaliyeed weerarka aan laheyn wax dareen ah ee ay xarakada Alshabaab ku qaadeen xaruntaasi.
Waxa uu Raiisul wasaare saacid sidoo kale sheegay in Qaramada midoobay ay yihin saaxiibo dhow dowlada federaalka Soomaaliya, islamarkaana qeyb weyn ka ah taakuleynta Umada Somaaliyeed .
Dhowaan ayuu sheegay Mr Saacid in dowladiisa iyo Ciidamada Garabka siinaya ee Amisom ay bilaabayaan Baaritaano weyn oo sida uu sheegay loogaga hortagayo weerara qaraxyada ah ee lamafilaanka loola eegto shacabka iyo Goobaha hay’adaha samafarka degen yihiin.
Dhankiisa Maxamed Salax Annadiif Danjiraha SOomaaliya ee Midowga Afrika waxa uu cambaareyn kulul u jeediyay falkii maanta waxaana uu ku tilmaamay mid ka dhan ah horukaca iyo horumarka ay dadka soomaaliyeed kaga baxayaan dhibaatada soo daashatay mudadii burburka ay kujirtay.
Waxa uu sidoo kale ugu baaqay ciidamada dowlada iyo kuwa amisom in ay ka hortagaan falalka noocaas ah ayna ku mahadsan yihiin howlgalkii deg dega ahaa ee ay ku furteen xarunta UNDB maanta.
Masuuliyiintan ayaa soo saaray warsaxaafadeed maanta ka dib weerarka waxaana warsaxaafadeedkooda ku lifaaqnaa tacsi loo dirayo dhinacyadii ku waxyeeloobay weerarkii maanta.